Dhakhaatiirta Ghana oo cabanaya - BBC Somali
Dhakhaatiirta Ghana oo cabanaya
30 Luulyo 2015
Midowga dhakhaatiirta ee dalka Ghana, ayaa sheegay in dhaqaatiirta dalka aysan haysan wax dukumiinti ah oo ku saabsan shuruudaha ay tahay in ay ku shaqeeyaan, marka laga reebo waraaqaha lagu soo magacaabay.
Dhakhaatiirta ayaa ku doodaya in marka laga soo tago mushaarka labada todobaad, oo loo dhaafo marka ay dhintaan, aysan jirin wax heshiis ah oo kale oo muujinaya faa'iidooyinka iyo mas'uuliyadda shaqada ay qabanayaan.
Ururka dhakhaatiirta ayaa bishii November ee sanadkii hore soo saaray digniin ah, in 4000 oo dhakhaatiirta dalka Ghana ay diyaar u yihiin in ay is casilaan bisha June ee sanadkan, haddii aan la cadaynin xaaladaha iyo shuruudahooda shaqadooda.
Hase yeeshee, ururka ayaa kordhiyay waqtiga ay qabteen oo ka dhigay ilaa bisha July, kaddib markii dowladda ay u xaqiijisay in ay eegayso dalabkooda.
Balse, ururka caafimaadka ayaa sheegay in lagu guuldaraystay in heshii la gaaro. Shaqo joojinta ayaa saamayn xun ku yeelatay adeegyada caafimaadka oo culays sii saartay.
Sarkaal ka tirsan xafiika madaxweynaha, oo la yiraahdo , Stan Dogbe, ayaa markii arrintaasi ay dowladda shaacisay, waxa uu baraha bulshada ku qoray in dalabka dhakhaatiirtu yahay mid kharash badan.
Waxa uu sheegay in hay'adda caafimaadku ay u baahan tahay in ay dowladda waqti dheeraad ah siiso si looga wadahadlo dalabkooda.
Waxa uu intaa ku daray in midowga dhakhaatiirta Ghana looga baahan yahay in dowladda ay siiyaan wakhti badan, si looga arrinsado saameynta ka dhalan karta dalabkooda.
Xafiiska madaxweyanaha ayaa diwaangeliyay ilaa 10 dalab oo ay dhakhaatiirta doonayaan oo ay ka mid yihiin, in laga dhaafo canshuurta soo dejinta baabuurta, in laga wada bixiyo waxbarashada sare ee caafimaadka ee jaamacadda, caymiska dhinaca sharciga iyo in laga dhaafo kororka shidaalka, dharka iyo in la siiyo lacagaha waqtiga dheeraadka ah ay shaqeeyaan.